Global Voices teny Malagasy » Miavo-tena mba hiangana ny gazety iray ao Myanmar amin’ny fiteny Mon rehefa nitolona 20 taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Desambra 2019 5:38 GMT 1	 · Mpanoratra The Irrawaddy Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Teratany, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Saripika avy amin'ny tranonkala The Irrawaddy
Ny endrika orizinalin'ity lahatsoratr'i  Lawi Weng ity dia nivoaka tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Myanmar. Ny endrika nasiam-panovana no navoaka eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Vao nankalaza ny faha-20 taona niasany ny gazety iray mivoaka isa-kerinandro ao Myanmar amin'ny fiteny Mon  manana ny anarana Guiding Star [Kintana Mpitari-dalana]. Niresaka tamin'i Nai Kasauh Mon, lehiben'ny tonian-dahatsoratra sady mpanorina ny gazety izahay, momba ireo fanamby amin'ny famoahana amin'ny fiteny Mon ao amin'ny tontolo iray matetika vinitra manoloana anao.
Manana olona 2 tapitrisa avy amin'ny foko Mon  i Myanmar, ary manodidina ny folo isanjato amin'ireo no mamaky ny Kintana Mpitaridalana, izay miorina ao Mawlamyine, renivohitry ny Fanjakana Mon.
Maro amin'ireo olona amin'izao fotoana no manjifa ny vaovao amin'ny findain-dry zareo ary vitsy amin'izao no mbola mividy gazety, araka an'i Nai Kasauh Mon.
Miatrika olana lehibe ny fampitam-baovao atonta pirinty noho ny fifindran'ny olona mankany amin'ny nomerika.
Midina hatrany amin'ny 1200 ny fivezivezena raha manodidina ny 5000 izany tamin'ny tanoa 2014.
Tsy mahasahana ny fandaniana intsony izahay. Taloha izahay no afa-nandoa ny mpanora-gazety tamin'ny alalan'ny gazetin-dokambarotray ary indraindray aza mahatahiry vola.
Nilaza ihany koa izy fa lasibatry ny famoretan'ny fanjakana sy ny fisamborana mpanora-gazety ny famoahana noho ny fahasahiany mihaika ny fitondrana miaramila.
Nilaza i Nai Kasauh Mon fa tsy afa-mamaky ny fiteny ny maro amin'ny vondrom-poko Mon ary anjakan'ny [na maro amin'ny mpamaky no] moanina bodista Mon amin'izao ny mpamaky. Tsy ankatoavina amin'ny fomba ofisialy ny fiteny Mon, ka maro amin'ny tanora, mianatra azy no manomboka mahatsapa hoe to atsy ilaina izy izany, hoy ny nampiany. Tsiniany ny tsy fisian'ny rafitra federaly sy ny fanjakazakan'ny fiteny birmana. Heveriny ho manana anjara toerana lehibe amin'ny fitandroana ny fiteny Mon ny Guiding Star.
Tian'ny mpamakinay ilay fiteny ary mampitombo ny fahafahany mamaky bebe kokoa ny fiteny Mon izany
Maniry ny hahazo fanomezana (fanampiana) ny Guiding Star handoavana ny karama ary nilaza i Nai Kasauh Mon fa ajanona ny famokarana raha vao latsaky ny 500 izany.
Raha mahita 50 tapitrisa kyats (33 200 dolara amerikana) izahay dia hampiasa izany amin'ny fanaovana pirinty. Raha mahazo 20 tapitrisa kyats isa-taona izahay dia afa-manome ny gazety maimaimpoana ho an'ny vondrom-poko Mon.
Misahana lohahevitra sy olana Mon amin'ny ankapobeny ny Guiding Star fa mandika ireo vaovao iraisampirenena sasantsasany ihany koa. Mamoaka ampahan-kevitra, tatitra fihariana, antsafa ary fanalana andro izy.
Manana ekipa ao amin'ny birao miisa 15 ny gazety sy mpaninjara miisa 25. Manana ekipa ihany koa izy ao Sangkhlaburi, tanàna anaty zaratany Thailandey ahitana vondrom-poko Mon betsaka.
Misy ireo mpamaky sasantsasany nanolo-kevitra tamin'ny Guiding Star hiantohana ny fianganany maharitra.
Nai Banyar Hongsar avy any Aostralia, iray amin'ny ekipa taloha tao amin'ny Guiding Star izay nanofana ireo Mon mpanora-gazety, nilaza fa tokony hifototra amin'ny fiainan'ny olona ny fanoratan-gazety fa tsy amin'ny mahafoko. Handamoka izay famoahana rehetra tsy mahaliana ny mpamaky, hoy izy—maro ireo vondrona mpampita vaovao manerana izao tontolo izao no nandamoka satria adinon-dry zareo ny manoratra lohahevitra misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona.
Manoratra ireo lohahevitra mora ny mpanora-gazety ary tsy miraharaha ireo olana lehibe, izay manan-danja amin'ny olona. Tsy manoratra vaovao manana fiantraikany lehibe ry zareo ka lasa tsy mahaliana ny olona ny gazety.
Nolazainy ny mahalohahevitra sy olana lehibe ny zavamahadomelina, ny fitotongan'ny vidin'ny fingotra, ireo mpiasa mpifindramonina tsy manana asa, ary ny tondra-drano mamotika ny tanimbary.
Tsy nanoratra ny fahasahiranan-dry zareo isika fa nanoratra momba ireo fety mandalo vanim-potoana. Efa fantatry ry zareo ny momba ny fetibe ka tsy mila manao tatitra momba izany isika. Indraindray tsy mahalala izay tokony hosoratana ny tanora mpanora-gazety.
Ny voaloham-pejin'ny Guiding Star no maneho ny fijotoson'ny kalitaon'ny gazety, hoy izy nanampy.
Nilaza i Mon Ashin Popphahongsa, Mon iray lehibebe ao amin'ny moanina bodista:
Mamaky sy manohana ny Kintana Mpitaridalana izahay ka hitanay ny olana sy lohahevitra Mon. Mihevitra izahay fa azo itokisana kokoa noho ny vondrona fampitam-baovao izy amin'ny resaka Mon.
Nilaza ilay moanina fa tiany ny vaovao sy fanehoan-kevitra ary ny tatitra ara-politika. Mba hiantohana ny fianganany indray dia nanolo-kevitra ny Kintana Mpitaridalana izy hirotsaka (hampiasa vola) amin'ny fitsinjarana sy hanitatra ny tambajotrany, fa tsy hanao ho laharam-pahamehana ny fitadiavan-tombombarotra.
Min Jotamoi Anin avy ao an-tanànan'i Ye no nilaza fa tsy maintsy hatsaraina ny paika ara-pidirana ao amin'ny tsena (marketing).
Mila tsiniana ny media sosialy. Misy ireo avy amin'ny vondrom-poko Mon te-hamaky ny Kintana mpitaridalana, saingy tsy afa-mividy azy noho ny faharatsian'ny fitsinjarana. Nanome vola aho tamin'ity taona ity hividianana Kintana Mpitaridalana ho an'ny sekolim-pirenena Mon.
Mahatsapa ny toy izany ihany koa ny hafa, saingy tsy fantatry ry zareo fa afa-mividy Guiding Star ho an'ireo sekolim-pirenena Mon ry zareo, hoy i Min Jotamoi Anin .
Ny fiandohan'ny Guiding Star
Tamin'ny voalohany i Nai Kasauh Mon niasa tamin'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona tao Sangkhlaburi, manavatsava ny sisintany Thailandey. Nanapa-kevitra izy fa tsy tokony ho ny resaka zon'olombelona ihany no fantatry ny olompirenena fa ny politika, toekarena, fanabeazana Mon ihany koa ary ny momba ireo mpiasa mpifindramonina ao Thailandy.
Tamin'ny Septambra 1999, tamin'ny faha-31 taonany izy no nanangana ny Guiding Start niaraka tamin'ny mpiara-miasa anankitelo.
Tsy mbola nisy tamin'ny Microsoft Word ny alfabeta Mon, na izany aza, ary niasa hamorona izany i Nai Ork Paing, naman'i Nai Kasauh Mon anankiray.
Nifandray tamin'ireo Mon moanina tao Yangon efa za-draharaha amin'ny resaka media i Nai Kasauh Mon.
Nisy moanina Mon niasa tamin'ny gazetiboky iray tao Yangon. Hain-dry zareo ny manoratra lahatsoratra ary tsara taiza amin'ny fiteny Mon ry zareo. Nanasa moanina iray [Nai Bee Htaw] aho hiasa mangingina ho anay ao amin'ny sisintany. Nolazainay tamin'ny fa te-hamelona famoahan-[gazety] izahay ary niasa ho tonia [mpanitsy] izy.
Tamin'izany fotoana izany, mety ho henjana ny sazy miandry raha mahatratra olona iray miasa amin'ny fampitam-baovao miampita sisintany ny miaramila.
Tsy ampy fitaovana [tsy ampy vola] ny Guiding Star hanaovana kopia maro, ary nisy Mon iray monina ao Thailandy nanampy tamin'ny fitendrena sy fanaovana pirinty ny gazety tao Bangkok.
Niasa ho anay maimaimpoana izy tamin'ny voalohany, Rehefa vita ny pirinty, averiny any amin'ny sisintany izany ary tsinjarainy amin'ireo Mon mpifindramonina aza.
Tamin'ny voalohany ny Guiding Star nanao kopia 500 isaky ny famoahana, izay tsinjaraina eny amin'ny sisintany ny ankamaroany. Nanindra izany fotoana izany anefa i Nai Kasauh Mon, niasa tao amin'ny Mon Relief and Development Committee [komitim-pampandrosoana sy fanavotana Mon] sy ny Programam-panabeazana ampitain-davitra.
Nahangombola tamin'ny asako aho ary nanampy tamin'ny fananganana ny gazety. Efa saika hijanona izahay tamin'izay fotoana izany noho ny fahamaroan'ny fahasahiranana.
Tsy feno ny dosien'i Nai Kasauh Mon hidirana ao Thailandy, ka tsy maintsy eny amin'ny sisintany no iandrasany ny kopia.
Nanomboka tamin'ny 8 pejy endrika mainty sy fotsy ny Guiding Star. Tamin'ny taona 2001, noho ny fanampian'ny FTMF Burma Relief Center dia afa-nanitatra izany ho 12 pejy izy.
Tamin'ny taona 2008, sambany natonta printy mangingina tao amin'ny fanjakana Mon ny gazety niaraka tamin'ny fanampian'ny moanina, ary nitombo ny fahalalàna azy.
“Mary ny risika mihatra amin'ireo moanina manampy anay,” hoy i Nai Kasauh Mon.
Tamin'ny taona 2010, nisy ireo moanina sasantsasany niezaka ny hanao ankivy ny fifidianana ankapobeny, izay lazain-dry zareo ho sady tsy malalaka no tsy ara-drariny. Niantso ny vondrom-poko Mon ireo moanina ireo hanatevindaharana ny ankivy.
Voasambotra ny iray amin'ireo moanina nitarika ny ankivy ary voarohirohy tamin'ny fizarana ny gazety. Nitady ny monasiterany ny manampahefana ary nahita solosaina sy fanaovana pirinty. Voaheloka higadra mihoatra ny folo taona noho ireo fiampangana maro ilay moanina.
Mpaninjara iray mpikambana ao amin'ny New Mon State Party (NMSP) koa no voasambotra tamin'ny taona 2003. Nohazonina iray volana izy fa navotsotra rehefa nifampiraharaha tamin'ny fitondrana ny NMSP.
Nisy fahalalahan-gazety kokoa ny tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha U Thein Sein, izay tonga teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2013, indrindra ho an'ireo famoahana ara-poko.
Namela ny ekipan'ny Guiding Star hody avy any an-tsesitany ny fanavaozana. Nisy fihaonana nifanaovana tamin'ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina Mon hiresahana amin'ny ahafahan'ny Guiding Star miorina ao amin'ny Fanjakana Mon.
“Ratsy ny lalana mankao Mon State (fanjakana Mon) tamin'izany fotoana izany. Nandray sambo izahay raha handeha,” hoy ny tsiaron'i Nai Kasauh Mon.
Efa miomana ny hamory indray ireo tambajotram-bolantera (araka ny fanoratra talohan'ny fanjanahantany ireo mpirotsaka antsitrapo) eo ho eo amin'ny 100 eo izay nizara ny gazety nandritra ny fitondrana miaramila ny Guiding Star.
Nahalafo kopia miisa 5000 isaky ny mivoaka amin'ny vidiny 500 kyats ($0.33) tsirairay ny gazety. Enintaona izao no niorina tao amin'ny Fanjakana Mon ny Guiding Star, taorian'ny 14 taona tany ampita ao anatin'ny sisitany Thailandey.
Nandray tsara anay ry zareo. Mahatsapa fanohanana matanjaka avy amin'ny Mon izahay. Amin'ireo famoaham-baovao ataon'ny foko vitsy an'isa, izahay no voalohany namoaka tao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/10/145455/
 avy amin'ny foko Mon: https://en.wikipedia.org/wiki/Mon_people